Thursday,3Jan, 2019 1:04 PM
जब पार्टीमा ‘मनी र मसल्स’वालाहरू हावी हुन्छन् तब इमान्दार कार्यकर्ताले चुटिएरै घाइते हुनुपर्दाेरहेछ । हाम्रोमा यस्ता पनि नेता छन् जो ट्वाइलेटबाट ढिलो निस्किएकै निहुँले आफ्नै पितृमाथि मुक्का बजार्छन्, घाइते बनाउँछन् । जब पीडित प्रहरीको शरणमा न्याय खोज्दै पुग्छ अनि उल्टै ठूला नेतालाई फोन हान्न लगाएर प्रहरी र पीडितलाई दबाब दिन्छन् ।
सोमबार आफ्ना प्रातःस्मरणीय नेता बीपी कोइरालाले थालेको मेलमिलाप दिवश मनाउने पूर्वसन्ध्यामा चारतारे चुटिएका हुन् । चुटिने ६९ वर्षीय वृद्ध न्याय खोज्दै बानेश्वर प्रहरी चौकीतिर धाइरहेका छन् । मुक्का बजार्ने डन हंशराज वाग्लेचाहिँ म्यानपावर व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । जसले घरमा पञ्चेबाजा बजाएर भिœयाएकी श्रीमती हुँदाहुँंदै बाहिर अर्की युवती राखेर पछि बिचल्ली बनाइदिएका थिए ।
बयोवृद्ध व्यक्तिले हंशराजबाट मुक्का खानुपर्ने मामुली कारण हो, बाथरुमबाट ढिलो निस्किनु । त्यो रेसुंगा रेष्टुराँ कान्तिपुर दैनिकको पुरानो कार्यालय ठीकपछाडि तीनकुनेमा अवस्थित छ । जाडो बढेसँगै बोकाको मासु, सुप र हल्का मदिरा सेवन गर्न गोरखाकै मानिसले चलाएको रेसुंगामा मानिसको भीड लाग्ने गर्छ । त्यही मेसोमा तुलाराम त्यहाँ पुगेर जाडो भगाइरहेका थिए । झम्के साँझ नपर्दै ६ बजेअगावै कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष हंसराज पनि सुजित श्रेष्ठसँग त्यहीँ पुगे । सुजित पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन् र फोरममा उपाध्यक्ष छन् ।
खानपिन सकेर तुलाराम ट्वाइलेटभित्र छिरेका मात्र के थिए बाहिरबाट निरन्तर ‘ढक ढक’को आवाज आउन थाल्यो । यसरी ढोकामा हानेर ती वृद्धलाई परेशान गर्ने पात्र उनै हंसराज थिए । भित्रबाट केही आवाज आएन, फेरि ढक्ढकाए, यो क्रम जारी रह्यो । भित्रबाट दाहाल निस्किए र हंस पसे । निस्कनासाथ दाहालले कस्तो असभ्य तरिका हो यो ? ट्वाइलेट छिर्दा पनि सुख नदिने ? बिना काम ट्वाइलेटमा को बस्छ ? भनी भुत्भुताए । यो कुरा हंसले सुनिरहेका थिए, शौचालयबाट निस्कँदा नै रिसाएर आएका उनले तैंले के भनिस् ? भन्दै दाहाल बसिरहेकै ठाउँमा गएर दुई मुक्का बर्साइहाले । बयोवृद्धले हट्टाकट्टाको मुक्का थेग्न सक्ने कुरै थिएन । तिरिमिरी भएका उनले त्यहाँबाटै मोबाइलमा सन्देश पठाए । यो सब सुजितले हेरिरहेका थिए । उनैले अब यहाँ नबसौं, खतरा हुनसक्छ भनी रेष्टुरेण्टबाट निकाले । हंस निस्कनासाथ त्यहां दुई दर्जनजति हट्टाकट्टा युवाहरूको हुल भित्रियो । उनीहरूले हंसलाई खोजे पनि भेट्टाएनन् । हंस धन्नले बचे, उनी त्यहीं भएको भए ठूलै घटना हुने रहेछ । र, तिनै साथीहरुले तुलारामलाई त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस अस्पताल पु¥याए । त्यहाँ २ दिन बसेर उनी डिस्चार्ज भए । आफूमाथि भएको ज्यादतीविरुद्ध न्याय खोज्दै तीनकुनेस्थित प्रहरी कार्यालयमा पुगे । र न्यायका लागि उजुरी हाले । हंसराजलाई समेत बोलाएर प्रहरीले सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढायो । हंस पनि कांग्रेसका र तुला पनि । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता सुरेन्द्र पाण्डेहरू समेत लागी मिलापत्रमा झगडा टुंगिएको छ । मिलापत्रमा हंसले गल्ती स्विकारेको र अबदेखि यस्तो हरकत नदोहोर्याउने प्रतिबद्धतामा ल्याप्चे लगाउँदै वृद्धलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ ।
उता, सोमबार देशभर कांग्रेसीजनले ४३ औं मेलमिलाप दिवस मनाइरहँदा ललितपुरको नखिपोटमा अर्काे डनले यसरी नै कांग्रेसकै नेतालाई बजाउन खोजे । धन्न अरूले छेके र अप्रिय घटना हुन पाएन । दुई ध्रुवमा कित्ताकाट भएका नेतालाई मिलाएर ललितपुरमा मेलमिलाप दिवस मनाउने जिम्मा पाएका थिए, उमाकान्त चौधरीले, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री । त्यसका लागि दुई दिनसम्म घनीभूत छलफल चलाए । दुवै पक्षलाई मनाए । र, पार्टी कार्यालयमै कार्यक्रम मनाउने तय भयो । निर्धारित तालिकाअनुसार सबै भेला भए ।प्रदेश सांसद विजया केसी, राष्ट्रियसभा सांसद धना खतिवडा, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयसमशेर राणा, पूर्वसांसद चन्द्र महर्जनसहित तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले मञ्चमा ठाउँ पाए । पूर्वसांसद रामकृष्ण चित्रकार, जितेन्द्रकुमार मलेकु श्रेष्ठहरू तलै परे ।
बिहान साढे ११ बजेबाट कार्यक्रम शुरु भयो । कर्मा व्यञ्जनकारले कार्यक्रम शुरु भएको उद्घोष गरिरहँदा तल मीनकृष्ण महर्जन र कवेलबहादुर लामाबीच गलफत्ती चलिरहेको थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा दिएको धोखाधडीको प्रसंग निकालेर मीनकृष्णले कवेलबहादुरलाई मुक्का प्रहार गर्न खोजेपछि तनाव उत्पन्न भयो । धन्न रामकृष्ण चित्रकार र चन्द्र महर्जनहरूले छेके र कुनै अप्रिय घटना हुन पाएन । यसरी मेलमिलाप दिवसकै दिन हात हालाहालको स्थिति आएपछि आधाभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता कार्यक्रम बहिष्कार गरी निस्किए । र, रोडमा भेला भएका असन्तुष्ट पक्षले जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्काे कार्यक्रम गर्न थाले । भनिएको छ, मेलमिलाप दिवस तर पार्टी कार्यालयभित्र एउटा कार्यक्रम, बाहिर अर्काे पक्षको कार्यक्रम । बाहिरको उक्त कार्यक्रमलाई धना खतिवडा रामकृष्ण चित्रकार, नगर सभापतिहरू दिवाकर सिलवाल, राजेश महर्जन र ललिता खनियाँँहरूले संम्बोधन गरेका थिए ।